अन्तर्वार्ताको तयारी - टिप्स - साप्ताहिक
आश्विन २६, २०७४
सरकारी जागिर खाने चाहना धेरैमा हुन्छ । निजी संघसंस्थामा भन्दा सरकारी रोजगारीमा स्थायित्व, पेन्सन आदि सुविधा हुने भएकाले धेरैको आकर्षण यसमा देखिएको हो । सरकारी रोजगारीमा जान चाहने कतिपय उम्मेदवार लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि अन्तर्वार्तामा असफल हुन्छन् । सामान्य विषयमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा धेरैले अन्तर्वार्तामा निराश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भै अन्तर्वार्तामा जानुअघि हरेक विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र बलियो हुनुपर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र बलियो भएका विद्यार्थीको अन्तर्वार्ता राम्रो हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैगरी, लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षामा अब्बल ठहरिने विद्यार्थी अन्तर्वार्तामा छनौट हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा शैक्षिक योग्यतासँगै लिखित परीक्षामा राम्रो अंक हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत व्यवहार आचरणलगायत सोधिएको विषयवस्तुमा अपडेट नहुँदा अन्तर्वार्तामा असफल हुने सम्भावना हुन्छ ।
अन्तर्वार्ता दिन जाने व्यक्ति औपचारिक पोसाकमा हुनुपर्छ । अन्तर्वार्ता लिइने कोठामा सोधेर मात्र प्रवेश गर्नुपर्छ । कोठामा प्रवेश गरेपछि अन्तर्वार्ता लिने सबै व्यक्तिलाई अभिवादन गर्नुपर्छ, जसले अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिमा सकारात्मक भावना जगाउँछ । अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले बस्न अनुरोध गरेपछि मात्र कुर्सीमा बस्नुपर्छ । अन्तर्वार्ता दिँदा राम्रोसँग सुनेर निर्धक्क जवाफ दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा एकैपटक तीन–चार जनाले प्रश्न सोध्ने भएकाले नहडबडाई सबैका प्रश्नको एक–एकगरी जवाफ दिनुपर्छ । नजानेको प्रश्नलाई बलजफ्ती अथवा लगत्तै उत्तर दिनुहुँदैन । आफूलाई नआएको विषयमा यो विषयमा मेरो अध्ययन पुगेन भन्दै विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्नुपर्छ ।
अन्तर्वार्ता दिन जानुभन्दा एक साताअघिदेखि नै समसायिक विषयमा अपडेट हुनुपर्छ । आफूले जुन विषय पढेको हो सोही विषयबाट धेरै प्रश्न सोधिन सक्ने भएकाले राम्रो तयारी गरेर जानुपर्छ । आफूले गरेका राम्रा कामहरूका बारेमा अन्तर्वार्ताकारहरूको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । आफू जुन क्षेत्रमा जाने हो उक्त क्षेत्रको विषयमा आफ्ना योजनाहरू स्पष्ट रुपमा व्यक्त गर्न सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ । अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले आग्रह गरेपछि मात्र अन्तर्वार्ता लिइने कोठाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।
प्रकाशित :आश्विन २६, २०७४
विश्वकप फुटबलको फाइनल कसरी हेर्ने तयारी गर्नुभएको छ ?
नयाँ इनिङको तयारी
कस्तो हुनुपर्छ साउने आहार श्रावण ८, २०७५
छालामा बेसनका फाइदाहरु जेष्ठ २३, २०७५
जोगिऊँ निपा भाइरसबाट जेष्ठ २२, २०७५
गर्मीमा पसिनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जेष्ठ २१, २०७५
गर्मीमा खानपान वैशाख २६, २०७५
स्वास्थ्यका लागि काँक्रो वैशाख २४, २०७५